Chee echiche, taa, na nsogbu ndị ị na-eche | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na-atụgharị uche taa n'ihe isi ike ndị ị na-eche
di Paolo Tescione - Maggio 26, 2020
Ma Jisus weliri anya-Ya elu, si, Nna, oge hour abiawo. Nye nwa gị otuto, ka ọkpara gị wee nye gị otuto. ” Jọn 17: 1
Inye Ọkpara ahụ otuto bụ ọrụ Nna, ma ọ bụkwa omume nke anyị niile kwesịrị ị bea ntị na ya!
Nke mbu, anyi kwesiri ichota “oge awa” nke Jisos kwuru maka ya dika oge awa nke nkpogide ya. Na mbu, nke a nwere ike ịdị ka oge obi jọrọ njọ. Mana, site n’echiche Chineke, Jizọs na-ahụ ya dịka awa nke ebube ya. Ọ bụ awa ahụ mgbe Nna nke bi n’eluigwe buliri ya elu n’ihi na o mezuru uche Nna ya n’ụzọ zuru oke. Ọ nakweere ọnwụ ya n'ụzọ zuru oke maka nzọpụta nke ụwa.
Anyị aghaghịkwa ịhụ ya site n'echiche anyị. Site n’uche banyere ndụ anyị kwa ụbọchị, anyị ga-ahụrịrị na “awa” a bụ ihe anyị nwere ike ịnabata ma na-amịpụta mkpụrụ. “Oge awa” Jizọs bụ ihe anyị ga-ebi mgbe niile. Dị ka? Embranabata obe na ndu ayi mgbe nile ka obea bu oge inye otuto. N'ime ime nke a, obebe anyị na-ewere echiche nke Chukwu, na-ekewa onwe ha ka ha wee bụrụ isi iyi nke amara nke Chineke.
Mma nke Ozi Ọma bụ na ahụhụ ọ bụla anyị na-atachi obi, obe ọ bụla anyị na-eburu, bụ ohere iji gosi Obe Kraịst. A kpọrọ anyị oku ka anyị nye Ya otuto mgbe niile site na ibi ndụ ahụhụ na ọnwụ Ya na ndụ anyị.
Na-atụgharị uche taa n'ihe isi ike ndị ị na-eche. Marakwa na, n’ime Kraịst, nsogbu ndị ahụ nwere ike ịkekọrịta ịhụnanya mgbapụta Ya ma ọ bụrụ na i kwere ya.
Jesus, a na m enye gị obe m na nsogbu m. Are bụ Chukwu ma nwee ike ịgbanwe ihe niile ka ọ bụrụ ebube. Jesus m kwere na gị.
Ntụgharị uche nke ụbọchị: kpegara Nna Anyị nke Bi n’Eluigwe ekpere
Ntụgharị uche nke ụbọchị: Chọọchị ga-enwe mmeri mgbe niile
Ntụgharị uche nke ụbọchị: ịghọta ihe omimi nke igwe